जाडो मौसममा कपाल झरेर समस्यामा हुनुहुन्छ? त्यसोभए यसरी धुनुहोस कपाल! – Online Khabar 24
जाडो मौसममा कपाल झरेर समस्यामा हुनुहुन्छ? त्यसोभए यसरी धुनुहोस कपाल!
December 26, 2020 by admin admin
प्राय मानिसहरु आफ्नो कपालको कारण समस्या मा रहन्छन्। तर के तपाईलाई थाहा छ कपाल झर्नुको मुख्य कारण राम्रोसँग कपाल नधुनु हो । तपाईले कसरी कपाल धुनुहुन्छ त्यसको अ र कपालमा पर्छ। थाहा पाउनुहोस कसरी कपाल धुनुपर्छ।
स्याम्पुको प्रयोग गर्नुहोस
कपाल धुनको लागि राम्रो स्याम्पुको प्रयोग गर्नुपछ। स्याम्पुको प्रयोग कपालको टेक्सचर र हेयर टाइप अनुसार गर्नुपर्छ। कपालमा स्याम्पु कति प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो कपालको लम्बाईमा निर्भर हुन्छ। कपालमा स्याम्पु लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हातमा स्याम्पु लिनुहोस् र त्यसपछि टाउकोमा लगाउनुहोस । त्यसपछि कपाल मसाज गर्नुहोस । मसाज गर्ने समयमा नङको प्रयोग नगर्नुहोस । औँलाको प्रयोगले हल्का प्रेशर दिनुहोस । त्यसपछि पानीले सफा गर्नुहोस । यदि तपाईको कपाल ओइली छ भने दुई पटक स्याम्पु लगाउनुहोस । भिडियो हेर्नुस।
स्याम्पु लगाएपछि कपालमा कंडीशनर लगाउनुहोस । यसकारण कपाल मोइस्चराइज हुन्छ। स्याम्पु प्रयोग गरेपछि कपालको जरालाई छोडी कपालमा कंडीशनर लगाउनुहोस । कपालको जरामा कहिले पनि कंडीशनर नलगाउनुहोस । कंडीशनर लगाएको ३ मिनेटपछि कपाल सफा गर्नुहोस । जसले कपालमा चमक आउँछ।
चिसो पानीले कपाल धुनुहोस
कंडीशनर लगाएपछि कपाल चिसो पानीले धुनुहोला। चिसो पानी कपालको लागि निकै लाभदायक रहेको छ। यसले कपाललाई मोइश्चर बनाउँछ। तातो पानीले कपल धुँदा कपाल ड्यामेज हुन्छ र झर्छ। धेरैले जाडो मौसममा कपाल धुनको लागि तातो पानीको प्रयोग गर्छन् तर जाडो मौषममा चिसो पानीको नै प्रयोग गर्नुहोस । साभार बिगुल न्युज भिडियो हेर्नुस।
Prevछक्क बहादुरले छक्क तरीकाले प्रम ओलीलाई यसरी छक्याए !
nextटिप्सको रूपमा कार उपहार पाउने यि युवती, पुरा खबर पढनुस